Faallooyin – Page 2 – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
XOG RASMI AH:- R/wasaare Kheyre Oo La Wareegay Awoodii Qaar Ka Mid Ah Golaha Wasiirada & Xaalada Oo Ku Cuslaatay
MUQDISHO(P-TIMES)-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa wajahaya maalmo adag, kaddib markii ay soo baxeen inuu si dad badan ula wareegay shaqadii qaar ka mid ah xubnaha Golaha wasiiradda. Is casiladii ay shalay sameysay Wasiiradii Gar-gaarka iyo Maaareynta Musiibooyinka Drs…
November 16, 2017 · by	Tifaftir Editor · 0
AKHRISO: Maxaad ka og tahay 7 qodob oo ay iskaga mid yihiin dalalka Somalia & Lubnaan?
Kadib is-casilaadda ra’isul wasaarihii lebnon Sacad Al-xariiri, faragelinta uu ka sheegtay in dalal badani ku hayaan Lebnon iyo isku-deyga dil uu ka badbaaday kadib markii xukuumadiisa ku guul-dareysatay hub ka dhigista maleeshiyaadka iyo kooxaha hubeysan, waxaa ii soo baxay 7…
November 6, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
MAQAAL XASAASI AH: DHAB KA HADAL AMMAANKA SOOMAALIYA & HALISTA CUSUB
Waxaa dhab ah oo la isku raacay in ammaanka Soomaaliya uu soo xumaanayo, yahayna mid aad u liita. Dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay, boqollaal qof baa nafta ku waayey qaraxyo baabuurta xammuulka loo adeegsaday, laguna bartilmaansaday xarumo Muqdisho caan…
November 4, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
WARBIXIN XOG BADAN: Ganacsatada Puntland maxay tahay Danta ugu jirtaa Amaan darro & Ka hor imaadka Horumarka Dekedda Boosaaso?
BOOSAASO(P-TIMES)- Saacadihii ugu dambeeyey magaalada Boosaaso waxaa ka taagnaa Is qabqabsi iyo xanibaad ay soo rogeen Ganacsatada Puntland ee kunool magaaladaas, kuwaas oo diiday in ay Doonyaha iyo Maraakiibtooda sidda shixnadaha Ganacsi ay ku dajiyaan Dekedda, iyagoo raacaya Nidaamka casriga…
November 1, 2017 · by	W LAASCAANO · 3
MAQAAL XASAASI AH: Maxaa hortaagan in ay is yeeshaan hadaladooda iyo ficiladoodu?
Isbedelkii dhacay horaantii sanadkan dhamaadka ah 2017 madaxweyne farmaajo waxa uga qabsoomay ballanqaadkiisii ayaynu warbixintan diiradda kusaaraynaa, gaar ahaan dhinacyada Amniga, Xuquuqda Bulshada, dhaqaalaha,siyaasada gudaha, hirgalinta nidaamka federaaliisamka, kudhaqanka Dastuurka, ladagaalanka musuq-maasuqa, xiriirka dawlad goboleedyada iyo horumarinta guud ee baahiyaha…
October 31, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
Akhriso: Sooyaalka Khilaafka Dowladda Federaalka Ah Iyo Dawladdaha Xubnaha ka ah Ee 5ta Bil Jirsaday!
Maanta oo Axad ah waxaa lagu wadaa in Muqdisho uu shir ku dhex-maro dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada si looga hadlo khilaaf-ka soo jiitamayey muddo 5 bil ah. Khilaafkan u dhaxeeya labada dhinac waxaa uu bilowday kadib markii dowladda…
October 29, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
XOG RASMI AH: Maxaad ka og tahay Khasaaraha Maaliyadeed ee uu geystay Qaraxii Zoobe?
Inkastoo qasaaraha nafeed aysan jirin wax ka muhiimsan, hadane Goobjoog Business waxa ay garatay in ay muhiim tahay in la-tira-koobo qasaaraha dhaqaale ee soo gaaray ganacsiyadii iyo xarumahii ku yaallay goobta uu qaraxa ka dhacay October 14. Sidaa darteed, koox…
October 23, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
FAALLO: Maxay tahay sababta loo baajiyey kulankii Madaxweyne Farmaajo isugu yeeray labada Aqal?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalbadey kulan degdeg ah oo uu la hadlo labada Aqal ee Xildhibaanada Federaalka Soomaaliya. Fariin ka soo baxdey shirguddoonka Baarlamaanka oo loo direy Xildhibaanada fiidnimadii xalay ayaa lagu sheegay in…
October 21, 2017 · by	W LAASCAANO · 2
MUQDISHO(P-TIMES)-Maalintii sabtida ee Taariikhdu ku asteysneyd 14 Oct, waxaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Ka dhacay Qarax balaaran, oo lagu tilmaamay kii ugu cuslaa ee abid ka dhaca magaalada muqdisho iyo Guud ahaan dalka. Qaraxan ayaa ahaa mid galaaftay Nolasha…
October 17, 2017 · by	Tifaftir Editor · 1
Dekada Bosaaso waa isha dhaqaalaha ee Puntland iyo gobalada dhexe, marsadan ayaa kamid ahayd mashaariicdii faro ku tiriska ahayd oo ay dowladii hore ee Soomaaliya ka fulisay gobalka Bari oo mudo dheer la oron jiray gaari-waa. Mashruuca Dekada Bosaaso ee…
October 12, 2017 · by	W LAASCAANO · 3
DHAB KA HADAL+AKHRISO: Hoggaamintii Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf & Hogaaminta maanta ee Hoggaamiyayaasha Soomaalida!!
GAROOWE(P-TIMES)- Col, Cabdullaahi Yuusuf Axmed Xasan wuxuu soo noqday Saraakiishii ciidamadii Xooga dalka, Hogaamiyihii Jamhadii SSDF ee la dagaalantay dawladdii Jaalle Siyaad Barre, Madaxweynihii ugu horeeyey ee Puntland oo uu labo goor noqday, Madaxweynihii ugu horeeyey ee Soomaaliyeed Muqdishana si…
October 10, 2017 · by	W LAASCAANO · 1
WARBIXIN XASAASI AH: Soomaali ay ku hardamayaan Sacuudi, Imaaraat,Qadar, Masar,Iiraan, Turki, Itoobiya & Reer Galbeed iyo Soomaali isku mashquulsan?
MUQDISHO(P-TIMES)- Wixii ka dambeeyey markii ay Soomaaliya si rasmi ah uga baxday KMG-nimadii sannadku markuu ahaa 2012-kii, waxaa ku bilowday duufaano waa weyn oo galaangal siyaasadeed ah, kuwaas oo ka imaanaya quwado kuhardamaya dunida, Soomaaliya-na wey u dabacsaneyd duulaan kasta…
October 9, 2017 · by	W LAASCAANO · 0
FAALLO: Dowladda Federaalku Ma Jiri Kartaa Dowlad Goboleedyada La’aantood?
Faalladan ayaa daba socota qormadii hore ee ahayd “Taariikhda oo aan wax laga baran waxay keentaa in khaladaadkii hore dib loogu noqdo“, taas oo aan ku soo qaadaney sida la taliyaasha waaweyn ee Farmaajo ay u afduubteen Dowalddnimadii Soomaaliyeed. HORDHAC…
October 8, 2017 · by	W LAASCAANO · 1
KISMAAYO(P-TIMES)- Saacado uun markii Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ku dhawaaqay in uu gogol wada hadal u dhigayo hogaamiyaasha dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaa soo baxaya xogo kala duwan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa…
Maxaa soo celceliya Colaaddaha G Mudug ee sannad kasta? Maxaase Xal rasmi ah looga gaari waayey?
GAALKACYO(P-TIMES) – Gaalkacyo waxay ku taala bartamaha Soomaaliya, waxayna muhiim u tahay ganacsiga iyo isku socodka guud ee gobalada dalka oo dhan, waxayna sadexdii sanno ee lasoo dhaafay martigalisay dagaalo u muuqda kuwa aan joogsi laheyn iyo heshiisyo aan dhaafin…
September 24, 2017 · by	W LAASCAANO · 5